पुलवाली पार्वती ! जसको अगुवाइमा पुल बन्यो - NewsNepalExpress
पुलवाली पार्वती ! जसको अगुवाइमा पुल बन्यो
२२ पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित चालिसे गाउँकी शान बनेकी छिन्, पार्वती भण्डारी । झट्ट हेर्दा मोडेलजस्तै देखिने उनी आफ्नो गाउँमा ‘मोडल’ (नमूना) काम गर्ने आँटिली केटीमा गनिएकी छिन् ।
२२ वर्षीय पार्वतीको मुख्य भूमिकामा चिरुरीखर्क–चालिसे झोलुंगे पुल बनेको छ, करिब ३ महिनाको मिहिनेतपछि ।
निकै मिहिनेतका साथ बनाइएको यो पुलले चालिसे गाउँका बासिन्दालाई अब वर्षामा बन्द बाकसभित्र बसेजस्तो खुम्चिनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । ठाडो खेलामा ज्यानकै बाजी मार्दै वारि–पारि गर्नुपर्ने बाध्यता पन्छाएको छ ।
पार्वतीको गाउँमा वस्ती निकै पातलो छ । धेरैजसो भुजेल र घर्तीमगरको बसोबास छ । पढेलेखेका युवा यो गाउँमा खासै छैनन् । भएका युवाहरु सानै उमेर बिहे गरेर घर ब्यवहारमै व्यस्त छन् ।
कृषिमा आश्रित यो गाउँलाई मेलम्ची खोला सँधै खुट्टामा बाँधिएको जञ्जिर जस्तो थियो, जसले पारी जान मात्रै रोकेन र माथि उठ्नै अल्झाइरह्यो । पुलका लागि गाउँलले धेरै आवाज उठाए, तर बजेट आयो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने आँट कसैैले गरेनन् । बजेट दिने निकायले पनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नै छैनन् भनेर टारिरहे ।
बजेटका लागि गाउँलेले जति पहल गरे पनि पुल बनाउन सक्छौं भनेर अघि तम्सिएर जाने पनि कोही भएनन् । निरक्षरको बस्ती भएकाले आफूहरु हेपिएको भान गाउँलेलाई नभएको हैन । तर, भरपर्दो नेतृत्वको अभावले चालिसे गाउँलाई मेलम्ची नदीले अरु गाउँसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गरिरहेको थियो । यही खुम्चिएको परिवेशभित्रै हुर्किएकी हुन् पार्वती । उनैको मुख्य सक्रियतामा भर्खर एउटा झोलुंगे पुल बनेको छ ।
हेलम्बु गाउँपालिकाले झोलुंगे पुलका लागि बजेट दिएपछि उनले यो पुल निर्माण गर्ने समितिको सचविका रुपमा काम गरिन् । उनका गाउँमा सबै जना यसमा जुटे । गाउँमा पढेलेखेका मान्छे नभएपछि पुल निर्माणका लागि उनैले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्‍यो ।
पार्वती यसै पनि गाउँका अरु युवाभन्दा भाग्यमानी पनि थिइन् । भुमेश्वरी स्कुलबाट एसएसली पास गरेकी उनले काठमाडौं आएर प्लस–टु पढ्न पाइन् ।
भिरबाट लडेर १ जनाको मृ*त्यु
इटालीबाट ८ ओटा देशमा टेक्दै भिभिआइपी चढ्ने डेढ अर्बको हेलिकप्टर काठमाण्डौ आइपुग्यो !
२० वर्षीय सम्मान भट्टको यसरि भयो काठमाडौं स्वयम्भूमा दुखद निधन
Prevपिडै-पिडामा रविको परिवार,आमाको सम्झनामा गित र आसु केही दिन अघिको झलक (भिडियो सहित)
Nextपाल्पामा अनौठो बालक, सहयोगको याचना
डेङ्गुबाट पाकिस्तानमा १६ को गयो ज्यान, देशभरी नौ हजार प्रभावित
तिन युवा झाक्रीले यसरी निकाले महिलाको शरीरबाट प्रेत आत्मा, ठाउको ठाउ झाक्रीको देखियो अचम्मको शक्ती (पुरा भिडियो)
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार (2)
स्वास्थ्य/ जीबन शैली (5)